ရဲရာထူး ခန့်ချုပ် ဘာကြောင့်ရူး ရလဲ ရှင်းပြီ ..” ကျနော့် ကို လိင်အမြတ် ထုတ် အခွင့်အေ ရး ယူသွားတာဖြစ်လို့..အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောက်ကို ပြန်တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေဟုဆို “ – EverBestMM
ရဲရာထူး ခန့်ချုပ် ဘာကြောင့်ရူး ရလဲ ရှင်းပြီ ..” ကျနော့် ကို လိင်အမြတ် ထုတ် အခွင့်အေ ရး ယူသွားတာဖြစ်လို့..အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောက်ကို ပြန်တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေဟုဆို “
ရဲ ရာထူး ခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း အနေဖြင့် ၎င်းအား တိုင်ကြားထား သည့် ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါ် ကာမလာဘ်ထိုးမှု အပါအဝင် စိတ်ရောဂါဖြစ်ပေါ် ခံစားရမှု တို့ အတွက် တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဇော်မိုးသန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ထံ မှ သိရသည် ။ ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ၍ ဦးဇော်မိုးသန်းအားမေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ယခုလိုဖြေကြားခဲ့ ပါသည်-
ကျနော့ဘက် က တရားစွဲ သင့်တယ်လို့ ယူဆမိ ပါတယ်… ဒါ့အပြင် ကျနော့အနေနဲ့ တပ်မတော်ကိုစတင် ဝင်ရောက်စဉ်ကနေ အသွင်ပြောင်းပြီးရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဖြစ်လို့ အခင်းမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ထိ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပကတိကျန်းမာ ခဲ့ပေမဲ့ အခုလိုတိုင်တန်းမှုတွေဖြစ်မှ ရုတ်ချည်းစိတ်ဝေဒနာသည်ဘဝရောက်ရတာဟာ အဲ့ဒီ၁၈ယောက်နဲ့အိပ်ပြီးမှ ဖြစ်လာရတာကြောင့် ကျနော့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရ တဲ့ တရားခံဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက်ကြောင့်ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာ တဲ့ အတွက် သူတို့ကိုတရားစွဲဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်’ လို့.…
ရဲရာထူး ခနျ့ခြုပျ ဘာကွောငျ့ရူး ရလဲ ရှငျးပွီ ..” ကနြေျာ့ ကို လိငျအမွတျ ထုတျ အခှငျ့အေ ရး ယူသှားတာဖွဈလို့..အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောကျကို ပွနျတရားစှဲဖို့ စီစဉျနဟေုဆို “
ရဲ ရာထူး ခနျ့ခြုပျ ဇျောမိုးသနျး အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးအား တိုငျကွားထား သညျ့ ရဲမေ ၁၈ ဦးအပျေါ ကာမလာဘျထိုးမှု အပါအဝငျ စိတျရောဂါဖွဈပျေါ ခံစားရမှု တို့ အတှကျ တရားစှဲ ဆိုဖှယျ ရှိကွောငျး ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဇျောမိုးသနျးနှငျ့ နီးစပျသူမြား ထံ မှ သိရသညျ ။ ထိုကိစ်စနဲ့ပတျသကျ ၍ ဦးဇျောမိုးသနျးအားမေးမွနျးရာ ၎င်းငျးမှ ယခုလိုဖွကွေားခဲ့ ပါသညျ-
“ညညျးတို့ ရာထူးတိုး လိုခငျြရငျတော့ ငါနဲ့ လာအိပျရမယျ လို့ နောကျပွောငျ ကြီစယျတဲ့သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လှတျခနဲပွောမိ လိုကျရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတညျပွောတယျထငျပွီး ရောကျလာတော့ လညျး ကိုယျ့ကုသိုလျ နဲ့ကိုယျပဲလေ လို့မှတျ ယူလိုကျလြော ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ….
တနညျးအားဖွငျ့ပွောရရငျ သူတို့ကသာ ကနြော့ကို လိငျအမွတျထုတျ အခှငျ့အရေး ယူသှားတာဖွဈလို့..
ကနြော့ဘကျ က တရားစှဲ သငျ့တယျလို့ ယူဆမိ ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ ကနြော့အနနေဲ့ တပျမတျောကိုစတငျ ဝငျရောကျစဉျကနေ အသှငျပွောငျးပွီးရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဖွဈလို့ အခငျးမဖွဈပှားခငျအခြိနျထိ ကိုယျရောစိတျပါ ပကတိကနျြးမာ ခဲ့ပမေဲ့ အခုလိုတိုငျတနျးမှုတှဖွေဈမှ ရုတျခညျြးစိတျဝဒေနာသညျဘဝရောကျရတာဟာ အဲ့ဒီ၁၈ယောကျနဲ့အိပျပွီးမှ ဖွဈလာရတာကွောငျ့ ကနြော့ရဲ့စိတျကနျြးမာရေးခြို့ယှငျးမှုဖွဈရ တဲ့ တရားခံဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျကွောငျ့ဆိုတာ ထငျရှားသိသာ တဲ့ အတှကျ သူတို့ကိုတရားစှဲဖို့ စီစဉျတာဖွဈတယျ’ လို့.…
ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဇျောမိုးသနျး မှ ပွနျလညျပွော ဆိုထားကွောငျး သိရသညျ ။
ကံကောင်းလွန်းနေ တဲ့ မြန်မာပြည် နဲ့ စကားရည်လု အပြစ်ပုံချတာတွေ မလု ပ်သင့်တော့တဲ့အချိန်
နိုင် ငံတော်ကနေ မြန်မာပြည်သူတွေအတွ က် ဝမ်းသာ စရာ သတင်းထပ်ကြားရပါပြီ
ဘ ဏ်ပိုင်ရှင်သူဌေးကို ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်ခို င်းပြီး ဒေါ်လာတစ်သိန်းလောင်းကြေးနိုင်သွားတဲ့ အဘွားရဲ့ အကွက်ဆန်း
မာန်အောင် တွင် သန္တာေ ကျာက်တန်းတခု ထွက်ပေါ်လာ၊ လူထောင် နဲ့ ချီပြီး လာကြည့်နေကြ